“फुलन्देको आमा”- उमेश, महिला पात्रबाट “सेलिब्रेटी” | Screennepal
“फुलन्देको आमा”- उमेश, महिला पात्रबाट “सेलिब्रेटी”
२०७६, ३० असार सोमबार ११:२१screennepalUncategorized0
नाम लिऔं, टेलिभिजन शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ हेरेका दर्शकको आँखा अगाडि एउटा पात्र आउँछ । महिला पात्र । उमेर ६० वर्ष कटेजस्तो। गुन्यू चोलो र कम्मरमा पटुकी बाँधेकी। नाक, कान, घाँटीमा गहना पहिरिएकी। त्यो भन्दा बेसी– कार्यक्रमको बीचमा आउने, मज्जाले हँसाउने। ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट ‘फुलन्देको आमा’को भूमिकालाई दर्शकले औधी रुचाए।
त्यसैले त यो पात्रको चर्चा, लोकप्रियता एकाएक चुलियो। स्टेज कार्यक्रममा देश–विदेशबाट बोलाउन थालियो। म्युजिक भिडियोमा खोज्न थालियो। तर, यो लोकप्रियता पाइसक्दा पनि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, –को हुन ‘फुलन्देको आमा’ ? चर्चा यहीँबाट शुरु गरौं। ‘फुलन्देको आमा’को भूमिकाबाट लोकप्रियता कमाएका कलाकार हुन्, उमेश राई। उमेर– २७ वर्ष। घर– भोजपुरको रानीबास।
उमेशले बाल्यकालमा कहिल्यै सोचेनन्, कलाकार बन्छु भनेर। बाल्यकाल त पुरानो कुरा भयो। दुई वर्ष अघिसम्म पनि कला कारितामा लाग्छु भन्ने उमेशमा कल्पनै थिएन । ब्याचलर अध्ययन गर्दै गर्दा २०७१ सालमा वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा साउदी अरेबिया पुगेका थिए, उमेश। त्यहाँ दुई वर्ष ‘स्टोर किपर’ को रूपमा काम गरे। केही पैसा कमाए, २०७३ सालमा नेपाल फर्किए।
फेरि रोजगारको लागि अन्य देश जाने योजना बुनेका थिए। तर, त्यसयता उनको जीवनको लय एकाएक फेरियो। परिचय फेरियो। उमेश त चर्चित हाँस्य कलाकार पो बन्न पुगे। कुराकानीमा उनले कलाकारिता आफूले कहिल्यै नसोचेको क्षेत्र भएको बताए । उमेशले भने, –‘साउदीबाट फर्केपछि दुवै, कतार जाने योजना बनाएको थिएँ। तर, एकाएक कहिल्यै नसोचेको क्षेत्रसँग जोडिन पुगें।’
उमेशको कथा रोचक छ। कलाकारितामा रुची नभएपनि नाच्ने, गाउने कला राम्रै थियो, उनमा। न स्टेज चाहिने, न माइक। वेडरुम, किचनमै नाचिदिन्थे अनि गाइदिन्थे । विदेशमा रहँदा उनले के गरे भने, – नाचगानका भिडियो बनाएर फेसबुकमा पोष्ट गर्न थाले। त्यसमा लाइक, कमेन्ट थुप्रै आउन थाल्यो। फेसबुकमा भिडियो हेर्ने धेरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिन थाले। फ्यान फ्लोइङ बढ्न थाल्यो।
फेरि रोजगारको लागि अन्य देश जाने योजना बुनेका थिए। तर, त्यसयता उनको जीवनको लय एकाएक फेरियो। परिचय फेरियो। उमेश त चर्चित हाँस्य कलाकार पो बन्न पुगे । उमेशले डिसी नेपालको स्टुडियोमा झण्डै डेढ घण्टा बिताए । कुराकानीमा उनले कला कारिता आफूले कहिल्यै नसोचेको क्षेत्र भएको बताए। नेपाल आएर पनि उमेशले त्यसलाई निरन्तरता दिए।
उनले फेसबुकमा पोष्ट गरेको एउटा सानो भिडियो भाइरल भइदियो। ‘म आफै फुलन्देको बाउ फुलन्देको आमा (महिला–पुरुष)पात्रमा सानो भिडियो बनाएर फेसबुकमा पोष्ट गरेको थिए। त्यो भिडियोले ५–६ लाख भ्यूज पाएको थियो’, उमेश सम्झन्छन्। त्यो भिडियो हेर्नेमध्ये चर्चित हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) पनि रहेछन्। फेसबुकमा उमेशलाई धुर्मुसले म्यासेज गरेछन्। उमेश आश्चर्यमा परे अनि, सोचे, – उहाँजस्तो चर्चित कलाकारको नामबाट म्यासेज आयो।
पक्कै यो फेक आइडी हो!’ उनले रिप्लाई गरेनन्। त्यसको केही घण्टा पछि धुर्मुससँग फोनवार्ता भयो । धुर्मसले आग्रह गरे, –‘भाइ मैले तपाइँको भिडियो ‘क्लिप’ हेरेँ। आउनुस्, सहकार्य गरेर काम गरौंँ ।’ उमेशले सोचे, – एकपटक ‘ट्राई’ गरेर हेरौं । लगत्तै कलाकार बन्न भोजपुरबाट काठमाडौं आए, उमेश। यो मात्र दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो। काठमाडौं आएर धुर्मुसलाई भेटे।
धुर्मुस–सुन्तली युट्युब च्यानलमा ‘गज्जब छबा’ सिरियलमा ‘फुलन्देको आमा’को भूमिकामा अभिनय गरे। त्यहाँ उनी धेरै टिक्न सकेनन्। विशेष कारणवश तीन एपिसोडपछि छाडे। सुन्धारामा एक रोधी घरमा काम गर्न थाले। त्यहाँ साँझमा काम गर्थे। दिउँसोको खाली समयमा फेसबुक लाइभमा आउँथे। ‘फेसबुक लाइभमा धेरैले मलाइ हेर्नुहुन्थ्यो। फ्यान फ्लोअर्स अचम्मले बढ्दै गइरहेको थियो’, उमेश सुनाउँछन्।
‘फेसबुक लाइभ’ कै कारण मिडियामा उमेशको खोजी हुन थाल्यो। उमेश थप्छन्, ‘मुख्य कुरा पब्लिकको सपोर्ट रहेछ। फेसबुक लाइभमा मेरो प्रस्तुती रुचाएपछि दिनमै तीन÷चार वटा युट्युब च्यानलबाट अन्तर्वार्ताका लागि आउन थाल्नु भयो।’ त्यसपश्चात ‘हाक्का हाक्की’ सिरियलसँग जोडिए। त्यसमा पनि चार एपिसोड काम गरेर छोडे। यो कुरा मात्र एक वर्ष अगाडिको हो।
त्यतिञ्जेलसम्म उमेशले फ्याट्टफुट्ट स्टेज कार्यक्रम, म्युजिक भिडियोमा काम पाउन थालिसकेका थिए । त्यसपश्चात उमेश ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ सँग जोडिए । एक दिन बाइकमा पछाडि बसेर कतै जाँदै थिए। जीतु नेपालले फोन गरे। उमेशलाई जीतुको फोन आउँदा पनि आश्चर्य लाग्यो रे! धुर्मुसको म्यासेज आउँदा जस्तै। ‘शुरुमा आश्चर्य भएँ। उहाँले रेडियो अडियोमा भेट्न बोलाउनुभयो। त्यहाँ गए, सल्लाह भयो।
अनि कार्यक्रममा ‘फुलन्देको आमा’ कै भूमिकामा देखिने सल्लाह भयो’, उमेश ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’मा जोडिनु अगाडिको कुरा सुनाउँ छन् । एउटा पुरुष महिला पात्रको भूमिकामा देखिनु गाह्रो काम हो । ‘फिजिकल रुपमा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ’, उमेश निर्धक्क भन्छन्, ‘बडिले भन्दा पनि दिमागका कारण त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको हुँ।’ शुरुवातमा ‘फुलन्देको आमा’ पात्रलाई लिएर नकारात्मक कमेन्टहरु बढी आउँथ्यो।
कोही पुरुषको क्यारेक्टर गर्न नसकेर महिलाको क्यारेक्टर गरेको भन्थे, कोही लिंगलाई लिएर अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्थे। उनकै भनाइमा, त्यस्ता कमेन्टहरु देख्दा साह्रै विरक्त लाग्थ्यो। तर, विस्तारै नराम्रा कमेन्टलाई वास्ता गर्न छाडे। राम्रो कमेन्टलाई मात्र फ्लो गर्न थाले। हिजोआज नराम्रा कमेन्ट निकै कम आउने उमेश बताउँछन्। अहिले त ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ ३६ एपिसोडसम्म पुगेको छ। यता, म्युजिक भिडियोमा ब्यस्तता लोभलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ।
एक वर्षको अवधिमा ६० बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन्। कमाई पनि राम्रै भइरहेको छ। हजारौं दर्शकको माया पाएका छन्। तरपनि उनी आफूलाई एक साधारण ब्यक्ति भन्न रुचाउँछन्। उनमा त्यो घमण्ड तडकभडक देखिँदैन पनि। ‘क्यामेरा र स्टेजमा मात्र हो कलाकार फिल हुने। अरुबेला त कलाकार हुँ जस्तो नै लाग्दैन्’, उमेश साधारण सुनिन्छन्।
Previous Postचलचित्र विकास बोर्डले भन्यो : सरोज खनालको फोटो नियोजित रुपमा खिचियो Next Post‘सानो मन’ जोडीले उद्घाटन गरे ललितपुरमा ‘आईआईएफटी’ ब्रान्च